‘Ama-ambulensi asazosebenza’ | IOL Isolezwe
Isolezwe / 4 February 2013, 10:21am / INTATHELI YESOLEZWE
UNKSZ MAKHOSAZANA Mdlalose umholi we DA kwezempilo KwaZulu-Natali uthi bazohlalela ethembeni lokuthi izethembiso ezenziwe ngama-ambulensi aduve eWentworth zizofezeka
31/01/13 DURBAN: AMA Ambulance asesibhedlela iWentworth Hospital apakiwe akasetshenziswa ngenxa yokuthi amanye awo afile namanye asazofakwa izinto ezincane ezishodayo kuwo nokulindeleke ukba lokhu kwenzeke asikhathini esilinganiselwa kwesingangenyanga. ISITHOMBE: NQOBILE MBONAMBI
AMANYE ama-ambulensi abalelwa ku-400 aseduve iminyaka emibili egcekeni lesibhedlela iWentworth eThekwini nasuse umsindo ngokungasebenzi kwawo azosatshalaliswa ezikhungweni ezehlukene namuhla.
Lokhu kuvezwe ngokhulumela uMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natal, uMnuz Sam Mkhwanazi, kade ephendula ngawo.
Imibiko yephephandaba elinguzakwabo weSolezwe, iSunday Tribune icaphune uMkhwanazi ethi ama-ambulensi angu-21 azosatshalaliswa namuhla.
Kule mibiko uMkhwanazi uyakuchitha ukuthi wonke ama-mbulensi ase-Wentworth selokhu ahlala khona ngonyaka ka-2010 kodwa wathi ukukhishwa kwawo kuwuhlelo oluqhubekayo olubuye luphazanyiswe yimidonsiswano esuke iphakathi kwezinkampani ezibanga amathenda okufakela ubucwepheshe.
Uthe angu-274 athengwa phakathi kuka-2010 no-2011 kanti angu-105 awo afika esekulungele ukusebenza ase akhishwa.
Uphinde wathi ngo-2011 no-2012 kuthengwe angu-280 esekukhishwe kuwona angu-39 kanti angu-29 awezimo eziphuthumayo zabakhulelwe nangu-71 ezinye izimo eziphuthumayo aselinde ukufakwa o-ova bese eqala ukusebenza.
Okhulumela i-DA kwezempilo KwaZulu-Natal, uNksz Makhosazana Mdlalose, obeyiphela endlebeni kwaboMnyango wezeMpilo efuna incazelo egcwele ngala maambulensi ngeledlule unikele nethimba lakhe kulesi sibhedlela efuna ukuyozibonela aphinde athole nolwazi olugcwele ngama ambulensi aduvile.
Utshele Isolezwe ukuthi bafike bachazelwa kuthi akuwona wonke ama-ambulensi alungele ukusebenza njengoba amanye esalinde ukufakelwa o-ova kanti kukhona nafile aselinde ukudayiswa.
Uthe bakhathazekile ngawu-100 alinde ukufakwa o-ova ngoba asehlale isikhathi eside kungekho okwenzekayo.
“ Sinikezwe isethembiso sokuthi ngeke kuphele isikhathi esingangenyanga lama ambulensi engakafakwa izinto ezishodayo, okwethu sekuwukulinda sibone ukuthi lokhu kuzokwenzeka yini,” kusho uNksz Mdlalose.
Kubikwa ukuthi ilinganiselwa kuR180 million imali echithwe umnyango uthenga lezi zi moto eziduvile.